Shyam Shah Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Shyam Shah
कथा : लाटीको छोरो
~श्याम साह~ यो सुन्दर बजारको कथा हो। जसको सौन्दर्यतासँगको सम्बन्ध ठिक उल्टो थियो। केहीकेही त्यसरी नै, जसरी जलस्रोतको सबैभन्दा धनी देश नेपालको सम्बन्ध यहाँको लोडसेडिङ र खानेपानीको हाहाकारसँग छ। सुरुमा त्यो डोम जातिको बस्ती थियो। जहाँ तिनीहरुले सुङ्गुर पाल्ने, हाटबजार … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : नेपाली कथा	| Shyam Shah	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
~श्याम साह~ “मन्त्रीज्यू, यो भट्टीलाई पनि काठमाडौं लैजानु प-यो !” भन्ने मानिस आफैं नशामा धुत् थियो । सँगैकाहरूलाई आँखा झ्म्क्यिाएको देखाउन उसले पूरै टाउको हल्लायो । सबै खित्का छाडेर हाँस्न थाले । तर मन्त्री हाँसेन । उसको मुहार झ्न् गम्भीर … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : मंगलरामको झोला
~श्याम साह~ असनपुरमा मंगलरामको पाँच बिघा खेत थियो । पूरै एक कट्ठामा घर र पाँच कट्ठाको करेसाबारी थियो । नागेसर नामको मुसहर स्थायी हरवाह थियो । मंगलरामकी श्रीमतीको खास नाम शुभद्रा भए पनि सबैले मंगला भनेर बोलाउँदा बोलाउँदै मंगली बनाइदिएका … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : छठ
~श्याम साह~ यसपटकको छठमा ऊ आफैं व्रत बस्ने कुरा गर्‍यो तर धेरैले पत्याएनन् । सुरुमा त उसकी स्वास्नीले नै पत्याइनन् । जसका लागि उसले छठको व्रत आफैं बस्न खोजेको थियो, उनैले नपत्याइदिएपछि उसलाई झोँक पनि नचलेको होइन । तर, भर्खरै … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : जायठ
~श्याम साह~ नगरपालिकाले पोखरीमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सुनेको दिन भोला महतोले छातीमा चक्कु रोपिए जस्तो अनुभव गरेको थियो। यसो होइन कि यो निर्णय कार्यकारी अधिकृतले एक्लै गरेको थियो। उसले सर्वदलीय मिटिङबाट यो निर्णय गराएको थियो। दोस्रो चौमासिकको अन्त्यमा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : सोनेलालको सैलुन
~श्याम साह~ तपाईंले कुनै सैलुनमा दाह्री कटाउनुअघि कहिल्यै हजामको अनुहारको भाव पढ्ने गर्नुभएको छ ? ख्याल गर्नुभएको छ त्यसबेला उसको मनस्थिति कस्तो छ जतिबेला उसको एउटा हातमा छुरा र अर्को हात तपाईंको घाँटीमा हुन्छ ? जतिबेला उसले तपाईंको दाह्री भिजाउने … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : १३,२४६
~श्याम साह~ पिठ्युँमा डोको भरी घाँस। एउटी केटी रोइरहेकी। मैले बहिनी किन रोएकी भनेर सोध्नै परेन। तिनले आफैं भनिन्, “गाउँका सबै साथीहरूलाई अपहरण गरेर लगे।” खास्टो ओढेकी उदास युवती घोसेमुन्टो लगाइरहेकी छन्। पिठ्युँको बन्दूकले आकाश नियालेको छ। “बन्दूक बोकेकी छ्यौ, … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : चोर
~श्याम साह~ मध्यरातमा वादल जोडले गर्जन थाल्यो । झिलिक्क उज्यालो हुने गरी विजुली पनि चम्के । लगत्तै आकाश नै खस्ने गरी पानी पनि पर्न थाल्यो । बखतबहादुरको त्यो फुसको घरले त्यत्रो पानी थेग्न सकेन । पानीका थोपाहरु ओछ्यानमा पनि चुहिन … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : मृत्युको कथा
~श्याम साह~ ऊ असफल कथाकार थियो । उसले अहिले सम्म एउटा पनि सफल कथा लेखेन । लेख्न त सकथ्यो होला, तर उसले लेखेन । त्यसो त ऊ सफल पनि कहिँ थिएन । उसले एउटी केटीलाई तीन बर्ष सम्म एकहोरो प्रेम … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →